Myat Shu - 2012 September
You are here : Myat Shu » Archives for September 2012
နံရံနဲ့ ငါတို့မှာ အခြားတစ်ဘက်ရှိနေသေးသရွေ့
Published By Myat Shu On Friday, September 28th 2012. Under မျက်ရှု, နှလုံးသားစာမျက်နှာ
“ရမ္မက်ဇောဟာ ရွံရှာစက်ဆုပ်ဖွယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အလိုလိုက်ပြီး ဒါကို“ချည့်နဲ့ခြင်း”လို့ပဲခေါ်ကြအောင်စို့ဗျာ။ အချစ်ရေးမှာ ရုပ်ခန္ဓာကလွဲလို့ တခြားဘာကိုမှ မမြင်နိုင်တဲ့ မွေးရာပါအားနည်းချက်တစ်မျိုးပေါ့။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သည်ချည့်နဲ့ခြင်း ဟာ အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ကျုပ်ရဲ့ မေ့လွယ်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ အခါမယ် ကျုပ်လွတ်လပ်မှုအတွက် အရေးလှစေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ မချဉ်းကပ်နိုင်သော အသွင်သဏ္ဌာန်တစ်မျိုးနဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့ အမှီအခိုကင်းမှုတို့ကတဆင့် သူက ကျုပ်အတွက် အသစ်အသစ်သော အောင်မြင်မှုတွေ ဆွတ်ခူးနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကိုပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ချစ်အာရုံမဆန်ခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်တစ်ခုအနေနဲ့ ကျုပ်က ချစ်အာရုံကို လွှမ်းမိုးစရာတစ်ခုခုပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဣတ္ထိယ မိတ်ဆွေတွေမှာ နပိုလီယံလိုပဲ အယုံအကြည်မျိုးရှိကြပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူတိုင်းလူတိုင်း အရေးနိမ့်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ သူတို့က အောင်ပွဲခံနိုင်ကြမယ်ဆိုတာပေါ့” (Albert Camus) အချစ်ဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကနေ တွားသွားတက်လာတယ်။ ခရီးကြီးက ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, September 25th 2012. Under ကဗျာ, မျက်ရှု
jimmiwin.com တချိန်တုန်းကပေါ့ သူမဘက်က မရွာသေးဘူး ကိုယ့်ဘက် စိုစိုရွှဲနေခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီလို ပြန်ပြောတတ်တဲ့ ပုံပြင်တိုင်းကလည်း ကိုယ့်ရင်ခုန်သံကို ထစ်ချုန်းထိတ်လန့်လို့။ အလွမ်းဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ပြန်စဉ်းစားရတဲ့ အတ္တရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်များ ငါ့ရင်ခုန်သံကိုမှ ခိုးယူပြီး ဘေးသားတွေလှီးထုတ်လိုက်ကြတာလဲ။ အခုတော့ ဇာတ်ခေါင်းကွဲကြီးထဲက မင်းသမီးလို စိတ်ကြီးတွေဝင်နေယုံ မှတပါး သူ့မှာ ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ သူမလည်း အနားမှာ မရှိတော့ဘူး။ သိသိချင်းမှာ လူရော ဘ၀ရော ပြိုကျသွားပြီ။ ရေမုတ်တစ်ဘက်ကိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ရင်ခုန်သံကိုကိုယ် မီးပုံရှို့ပူဇော်ရဲသူလေးရေ နင်နဲ့ငါ့အကြောင်း ၂၁ရာစုရဲ့ အစွန်ထောင့်နားကြရင် တချို့သော သူများ စာလုံးပြန်ပေါင်းချင်ပေါင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်လို အညတရကောင်လေးတစ်ယောက်အတွက် ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာလည်း လောကဓံ “၀၊ ထ၊ က၊ လ၊ သ” ကိုရေးတတ်ပါရဲ့ လူကြီးမင်းသာ အမှောင်မကွယ်ပါနဲ့ လမ်းလည်း ခဏဖယ်ပေးပါ။ ဟိရိနဲ့ သြတပ္ပတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးခေတ်မှာမှ ငါက ကဗျာတွေရေးဖြစ်ခဲ့....။ စိတ်လိုလက်ရ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကာမှ ဂငယ်ကွေ့နဲ့ ကြိုးဖြတ်သွားတယ် ကျန်နေသူက နတ်နေကိုင်းကိုတောင် ပြန်ပျိုးယူနေရတယ်။ ခေတ်ကြီးက ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မင်းနဲ့ငါ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ငါ့ဘက်ငါ့အထာက မင်းကို သိပ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာသာ ခုတလော ယောင်ယောင်ရွတ်နေမိတဲ့ ဂါထာဖြစ်လို့…….။ ။ စိမ်းခက်စိုး (အင်္ဂါ) စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ ညနေ - ၀၅း၁၈ ... Continue Reading
စိတ်ကူးယဉ်ပါ (သားသို့ပေးစာ – ၉)
Published By Myat Shu On Tuesday, September 18th 2012. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
ချစ်သောသားလေး ရဲဝဏ္ဏ... ဒီနှစ် ဇွန်လကုန်မှာ ဖေဖေတို့ဌာနကြီးက ထူးချွန်ဝန်ထမ်းတွေကို ဆုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ နေပြည်တော် ဘူတာကြီး အပေါ်ထပ်မှာပေါ့။ ထူးချွန်ဝန်ထမ်းတွေ ဆိုတာက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းအလိုက် စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့၊ အရးယူခံရမှု အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့၊ မတော်တဆမှု ရာနှုန်းနည်းတဲ့ တိုင်းရဲ့ တိုင်းတာဝန်ခံတွေ၊ ရထားလမ်းတံတားပေါ်မှာ ရထားလာနေချိန် ကြောင်ပြီး မပြေးနိုင်တဲ့ မြေးအဖွားနှစ်ယောက်ကို သက်စွန့်ဆံဖျား ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ စက်ခေါင်းမောင်းနဲ့ သူ့လက်ထောက်တို့အပြင် အားကစားထူးချွန်သူတွေပေါ့။ ဖေဖေက ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုပေးပွဲမှာ ဘူတာရုံကလေးဆိုတဲ့ စာအုပ်နဲ့ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ဆုရတာကြောင့် ဌာနက ထပ်ဆင့် ဂုဏ်ပြုတာမို့ အဲသည်ဆုပေးပွဲကို ဖေဖေလည်း တက်ရောက်ရတယ်။ ဆုပေးပွဲက မနက် ၁၁ နာရီမှာမှ စမှာဆိုတော့ ... Continue Reading
ဗဘယ်(လ်)နဂါးကြီး – ပိုလန်ဒဏ္ဍာရီ
Published By Myat Shu On Sunday, September 16th 2012. Under ပုံပြင်, ဘာသာပြန်, မျက်ရှု
The Legend of The Wawel Dragon ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ကွယ်။ ပိုလန်ပြည်မှာရှိတဲ့ “ဗဘယ်(လ်)” တောင်ကုန်းပေါ်က ကျောက်ဂူကြီး တစ်ခုမှာ အင်မတန် ဆိုးတဲ့ နဂါးကြီးတစ်ကောင် နေသတဲ့။ အဲဒီ နဂါးကြီးက နည်းနည်းနောနော အကောင်ကြီး မဟုတ်ဘူး။ အကြီးကြီးပေါ့။ ပါးစပ်ကနေ မီးတောက် မီးလျှံတွေ မှုတ်ထုတ်နိုင်တယ်။ လေထဲမှာ ပျံနိုင်တယ်။ အဲဒီ နဂါးကြီးဟာ ပိုလန်ပြည် တစ်ခွင်လုံးကို ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်သွားပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိကို တလွဲ အသုံးချပြီး ထင်ရာမြင်ရာတွေ လုပ်တော့တာပေါ့။ သိုးကလေးတွေ၊ နွားကလေးတွေကို ကိုက်စားတယ်။ လူတွေက သူ့ကို ၀ိုင်းဖမ်းမလို့ လိုက်လာရင် ပါးစပ်ကနေ မီးလျှံတွေ မှုတ်ထုတ်ပြီး လူတွေကို ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, September 10th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
မနေ့က ကိုကို အိမ်ပြန်လာတယ်။ သူ့မှာ ပြန်စရာအိမ်ရှိတယ်ဆိုတာ ဒုတိယအကြိမ် အမှတ်ရလာပြန်တယ် ထင်တာပဲ။ အမကြီးတယောက် သူ့မောင်ကလေး ပြန်လာတာကို ဖျတ်ဖျတ်လူး ပျော်ရွှင်ကာ ငိုကြီးချက်မတွေ ဖြစ်နေလိုက်တာ ကိုကို့မိန်းမတောင် အလွမ်းသယ်ဖို့ မတိုးသာဘူး။ ကိုကို့သား မောင်သူရက သူ့အသက် ၁၂ နှစ်အထိ တခါမှ မမြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဖေဆိုသူ ပိန်ကိုင်းကိုင်း ညစ်ထပ်ထပ် လူတယောက်ကို အံ့သြရှောင်ဖယ် အမူအရာနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကသာ စူးစမ်းတယ်။ သူ မြင်ဖူးမှတ်သိထားတဲ့ ဓာတ်ပုံထဲက အဖေက မျက်လုံးမျက်ဖန်လှလှ မျက်တောင်ကော့ကော့ အသားဖြူဖြူ မျက်နှာထားချိုချို လူချောတယောက်ဖြစ်နေတော့ အခုပုံစံနဲ့ ဆက်စပ်မရ ဖြစ်နေပုံပဲ။ ကိုကို ငယ်ငယ်က သိပ်ချောတဲ့လူ။ အရပ်မြင့်မြင့် ကိုယ်ဟန်ပါးပါးရှိကာ အပြုံးကလဲ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, September 8th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
သာလာယံဇရပ်တစ်ခုပေါ်တွင် ဖြစ်၏။ ခဲခုထားသော စားပွဲခုံရှည် အကျိုးအပဲ့တစ်လုံးကို ၀ိုင်းလျက် လူဆယ်ယောက်ခန့် ထိုင်နေကြလေသည်။ “ကိုင်း… လူလည်း စုံသလောက်ရှိပြီ။ စလိုက်ကြစို့လား” “စ ဆိုရင်ဖြင့် ကိုရင်ပဲ အဖွင့်စကား ပြောပေတော့ဗျာ” စပြောသူမှာ ခေါင်းတစ်ချက် ခပ်တည်တည် ညိတ်ပြကာ အလွန်အရေးကြီးသော မျက်နှာထားဖြင့် ထိုင်ရာမှ ထရပ်လေသည်။ “အဟမ်း… အဟမ်း” ကျန်သူများမှာ နီးစပ်ရာ အချင်းချင်း တွတ်ထိုးနေကြသဖြင့် မကြားကြ။ မတ်တပ်ထရပ်သူ စိတ်ထွက်သွား၏။ “အဟမ်းဟေ့… နင့်အမေ အဟမ်းတဲ့မှဟဲ့” ဆောင့်အော်ထည့်လိုက်မှ အားလုံးငြိမ်ကျသွား၏။ မတ်တပ်ရပ်နေသူက “ဒီလိုမှပေါ့” ဟူသော မျက်နှာထားဖြင့် တစ်ဦးချင်းကြည့်ပြီးမှ စပြော၏။ “အဟမ်း… ဒီလိုရှိပါတယ်” စကားစပြီးမှ သူ့စကားကို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိမရှိ အကဲခေတ်ကြည့်သေး၏။ အားလုံး ၀ိုင်းနားထောင်လျက် ပြူးကြောင်ကြောင် ၀ိုင်းကြည့်နေကြသည်ကို မြင်မှ ဆက်ပြော၏။ “အဟမ်း.. ဒီလိုရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, September 8th 2012. Under ကဗျာ, မျက်ရှု
တောင်ကျရေ နွားနှစ်ကောင်မ၀တဲ့ခေတ် ထောင်မလဲ သဲကော်ခေတ် အသဲကြားက မဲတစ်ပြားခေတ် အိုက်တိုးပကေးစံခေတ် တစ်ခါသုံး ဘောလ်ပင်ခေတ်။ “သူ့ခေတ်နဲ့တော့ သူတွင်ကျယ်”တဲ့ ဆင်ကြယ်ဖိနပ်က ပြောတယ်။ လူကြီးလူကောင်းဓားပြဆိုတာ ဗိုလ်အောင်ဒင်က စခဲ့တာပေါ့။ သစ္စာနီ ( inStyle Magazine, Issue 11, March, 2012 မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။) ... Continue Reading
“Solidarity with Burma – Media Workshops” – Yangon and Mandalay October 2012
Published By Myat Shu On Wednesday, September 5th 2012. Under မျက်ရှု, လက်တို့ခြင်း, အသိပေးခြင်း
The Lech Walesa Institute would like to invite young and aspiring journalist to participate in Media Workshops which will be held in two locations in the second part of October 2012. For each of the workshops we are looking for 10 participants who would like to take part ina... Continue Reading